Budata Autobahn Police Simulator 2 maka Windows
Budata Autobahn Police Simulator 2
Free Budata maka Windows
Budata Autobahn Police Simulator 2,
Autobahn Police Simulator 2 bụ egwuregwu ịme anwansị nke na -enye ndị egwuregwu ohere ịrụ ọrụ dị ka onye uwe ojii wee bụrụ onye nlekọta na -adịghị agbanwe agbanwe nke iwu.
Anyị nwere ike mepụta dike nke anyị mgbe anyị na -amalite Autobahn Police Simulator 2, egwuregwu ndị uwe ojii na -anabata ndị egwuregwu nokporo ụzọ awara awara Europe. Mgbe anyị mepụtara dike anyị, anyị na -agba mbọ ime iwu wee bilie site na ịrụ ọrụ enyere anyị nọrụ ndị uwe ojii. Anyị na -amalite egwuregwu nọdụ ndị uwe ojii wee malite site na -ewere ọrụ ndị a ebe a. Ka anyị na -arụcha ọrụ ndị ọzọ, anyị nwere ike melite ụlọ nche a wee mepee ndị ọrụ na ohere ọhụụ.
Ndị ọrụ dị iche iche na -echere anyị na Autobahn Police Simulator 2. Mgbe ụfọdụ anyị na -achụ ndị uwe ojii nazụ ụgbọ ala gafere oke ịgba ọsọ nokporo ụzọ awara awara. Mgbe ụfọdụ anyị na -ebute ụgbọ ala ndị dị mkpa ma ọ bụ nye nchekwa na saịtị mberede. Ajụjụ ndị a na -apụta namaghị ama. Ọ ga -ekwe anyị omume ịbawanye ọkwa anyị ka anyị rụchara ndị ozi.
Ọ ga -ekwe anyị omume ịkwalite ụgbọ ala na akụrụngwa anyị na Simulator 2 nke Autobahn. Obere usoro chọrọ nke Autobahn Police Simulator 2, egwuregwu ịme anwansị mepere emepe, bụ ndị a:
- Windows 7 sistemụ arụmọrụ
- 3 GHz quad -core processor
- 4 GB nke RAM
- Nvidia GeForce GTX 760 ma ọ bụ kaadị vidiyo dakọtara na 1GB vidiyo vidiyo
- 20GB nke nchekwa efu
Ngwa ndị emetụtara: Budata Police Simulator
Autobahn Police Simulator 2 Ụdịdị
Kacha ọhụrụ na: 14-08-2021
RimWorld bụ ógbè sayensị nke onye nwere ọgụgụ isi dabere na AI na-akwali. Site nike mmụọ nsọ Dwarf...
Autobahn Police Simulator 2 bụ egwuregwu ịme anwansị nke na -enye ndị egwuregwu ohere ịrụ ọrụ dị ka...
Ọrụ Ugbo dị ọcha 2018 bụ egwuregwu ịme anwansị ọhụrụ nke Techland, nke anyị maara nke ọma na...
Simulator Firefighting bụ otu egwuregwu ịme anwansị kacha mma ị nwere ike igwu na PC. Ọkụ ọkụ...
Onye uwe ojii uwe ojii: Ndị ọrụ nchekwa bụ egwuregwu ebe ị sonyere ndị uwe ojii nke obodo akụkọ ifo...
Ihe ngosi ụgbọ elu Microsoft na -aga nihu na -eji ụdị ọhụụ emepụ ndị ọrụ. Otu òké bụ naanị ihe ị ga...
Enwere ike ịkọwa Simulator Beast Battle dị ka egwuregwu ọgụ anụ mmiri dabere na physics. Anyị na...
Enwere ike ịkọwapụta Fly Simulator dị ka simulator ofufe nke na -enye gị ohere inwe oge ntụrụndụ...
PC Building Simulator bụ egwuregwu ụlọ kọmputa nwere ike ịnye gị ọ funụ na ozi ma ọ bụrụ na ịchọrọ...
Car Mechanic Simulator 2018 bụ njikọ ikpeazụ na usoro egwuregwu ịme anwansị a ma ama. Egwuregwu...
Enwere ike ịkọwa Simulator Rat dị ka egwuregwu lanarị nke nwere egwuregwu egwuregwu na -atọ ụtọ ma...
Simulator Farming, egwuregwu kachasị mma na egwuregwu njikwa, na -apụta dị ka Farming Simulator 22...
Budata Angry Birds
Budata VLC Media Player
Budata Adobe Premiere Pro